Horyaalka Ingiriiska oo Caawa Furmaya
Britain Football Soccer
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ee xilli ciyaareedkan 2017-2018 ayaa caawa fiidkii si rasmi ah daaha looga rogi doonaa.
Ciyaarta ugu horeysa ee sanadkaan, ayaa waxaa lagu furi doonaa kooxaha Arsenal iyo Leicester City, waxana ay ka dhici doontaa garoonka Emirates Stadium ee magaalada London.
Laacibiinta cusub ee Arsenal ee kala ah Alexandre Lacazette iyo Sead Kolasinac ayaa laga yaabaa in ay saftaan kulankoodi ugu horeeyey ee horyaalka Ingiriiska, laakin waxaanan safan karin weeraryahan Alexis Sanchez oo xanuunsan iyo Laurent Koscielny oo ganaaxan.
Dhinaca Leicester waxaa dhaawac uga maqnaan doona laacibiinteeda qadka dhexe ee kala ah Danny Drinkwater iyo Vicente Iborra.
Weerayahanka dhawaan kaga soo biiray kooxda Manchester City ee Kelechi Iheanacho ayaa lagu wadaa inuu caawa ka mid noqdo xidigaha u safan doona Leicester, waxaa weerarka kula lamaanaan doona Riyad Mahrez oo ay suuragal tahay inuu maalmaha soo socda ku biiro kooxda Roma.
Ciyaaraha kale ee horyaalka Ingiriiska ee todobaadkaan waxay dhici doonaan Sabtida, kooxuhuna waxay isu arki doonaan sidaan. Watford ayaa wajaheysa Liverpool, kooxda horyaalka difaacaneysa ee Chelsea ayaa soo dhaweyn doonta Burnley. Crystal Palace ayaa fooda dareysa Huddersfield Town, Everton waxay gurigeeda kusoo dhaweyneysaa Stoke City. Swansea City ayaa booqan doonta Southampton.
West Bromwich Albion ayaa la ballansan Sabtida AFC Bournemouth. Manchester City oo xagaagan keentay laacibiin qaali ah ayaa aadi doonta garoonka horyaalka ku cusub sanadkaan ee Brighton & Hove Albion.
Natiijooyinka ciyaarahan, kala soco www.voasomali.com